ဝက်ခြံတွေကိုဖယ်ရှားဖို့ရယူခြင်းများအတွက်အရေပြားစောင့်ရှောက် -Top ဆယ်ပါးသိကောင်းစရာများ | အရေပြားစောင့်ရှောက်ကုန်ပစ္စည်းများအွန်လိုင်း
ဝက်ခြံတွေကိုဖယ်ရှားဖို့ရယူခြင်းများအတွက်အရေပြားစောင့်ရှောက် -Top ဆယ်ပါးသိကောင်းစရာများ
admin ရဲ့2months ago အထူးပြောစရာမရှိ
1. Keep အတွက်မထိုက်မတန် – ဖွဲ့စည်းပုံအတွက်ထိန်းသိမ်းရန်ငြင်းပယ်မာနထောင်လွှားခြင်းနှင့် abasement ကနေချဉ်းကပ်နိုင်သောငြင်းပယ်ဖိအားဇာတ်စင်ချွတ်တှေ့ဆုံကအရေပြားအခြေအနေအရေးယူထောကျပံ့နိုငျ. မည်သည့်နည်းဖြင့်မဆို, သင့်ရဲ့လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်လေ့လှုပ်ရှားမှုကနေအရေပြားကိုအခွအေနေကြောင်းလုပ်နိုင်တဲ့အကျိုးဆက်ချွတ်ဖုိ့ရန်အရပ်ဌာန၌ဖြစ်အမျိုးမျိုးသောကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးလိုအပ်ချက်. သငျသညျအဝတျအစားကောင်းအမြင်နှင့်သင်၏ပုံပေါ်နေရာအဘယ်အရာကိုအသိပညာပေး, Display ကိုဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့်ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများ.
ဥပမာ, သိပ်သည်း lycra နှင့်နိုင်လွန် Keep ရုပ်ရှင်နှင့်သည် Periodic ထုတ်ဝေဥပမာအပေါ်ကြီးမားသောအုပ်စုတစ်စုတန်ခိုးစစ်တမ်းအစွန်းရောက် fit, သို့သော်သင်သည်မကောင်းတဲ့အသားအရေအခက်အခဲမှဖြစ်ပေါ်နိုင်လျှင်, ကိန်းဂဏန်းစိုထိုင်းဆအတွက်လုပ်ကွက်မှပွုစုပြိုးထောဤအတုအယောင်ပစ္စည်းန်းကျင်ရကာသေးငယ်သောဇီဝသက်ရှိလှုံ့ဆော်မှုအတွက်ထွက်ပေါ်လာတဲ့အထိအပူ. အစားထိုးအဖြစ်, သင့်ရဲ့အရေပြားပေါ်တွင်မနိုင်မှလုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုအပိုဆောင်းလေကြောင်းခွင့်နားလည်သို့မဟုတ်သာမန်ရောနှော၏ built unfastened အဝတ်အစားကောက်.
ထိုအသင်သည်သင်၏လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်နှင့်အတူအောင်မြင်ရန်ကြသောအခါ, ချွေးသို့မဟုတ်ဆည်မြောင်း display ကိုထံမှအဝတ်အစားအစိုဓာတ်ထဲကစာချုပ်. အစိုဓာတ်ကိုလျော့နည်းသို့မိုးရွာသွန်းမှုနှင့်အပြောင်းအလဲတချို့, ပြောင်လက်တောက်ပသောအဝတ်အစား. နှင့်သင့် display ကိုဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့်ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများတောက်ပစီမံခန့်ခွဲ, လွန်း. Crooked covering for the head, for illustration, can make smart brow extent flat toaskin condition difficulty. Accordingly throw headbands into the bathing apparatus after routine assembly.
Extra safeguard method contain applyingalip personal view that helpadull conclude asasubstitute ofaprohibitive personal view for minus pore-clogging; note the extra the shine, အပိုထို့နောက် comedogenic နှငျ့ညီညှတျနှင့်အသားအရေလုပ်နိုင်တဲ့ပိတ်ဆို့ခြင်းအတွက်အပိုငယ်ကို aperture. မျက်စိလိမ်းဆေးစနစ်တကျထက် liniment ၏ကြီးမြတ်အလေးချိန်ရှိခြင်းကြီးမြတ်အလေးချိန်ရှိခြင်းတို့ပါဝင်သည်နိုင်သည်ကိုသတိထားပါ, လိမ်းဆေးနှင့်လိမ်း, သူတို့ကအရမ်းကြီးမားတဲ့ရှိ connotation သည့်ဝိုင်းမျက်နှာအတိုင်းအတာအတွက်အသားအရေအတွက်သေးငယ်တဲ့ကို aperture blockage မှဖြစ်လိမ့်မယ်.
3. အစားအသောက်ထဲကနေ Abstinence – ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအစားအသောက်ထဲကနေ abstinence အခြေခံ. တစ်ခုသို့မဟုတ်အရေပြားအခြေအနေများ၏ဆေးဝါးတစ်ခုခုအတွက်အခန်းကဏ္ဍဇာတ်နာအောင်ပြောခြင်းမဟုတ်ထုတ်လုပ်မှုမထုတ်ဖော်ပြသ. မည်သည့်နည်းဖြင့်မဆို, what is favored for acne safeguard custody is this: What is superlative for your figure is superlative for your skin, particularly in consideration of your skin is the biggest means of your figure. ထို့ကြောင့်အစာအာဟာရမှသင်၏ abstinence အသိအမြင်မှစိတျထဲမှာထားကောင်းသောအခွအေနေအာဟာရအတွက်စုပ်ယူ, ကုန်ကြမ်းနှင့်ဆက်ပြောသည်နောက်ထပ်တစ်ခုခု. ဒါဟာမျှော်လင့်ဖို့ထောကျပံ့ပေးလိမ့်မည်အထောက်အကူတစ်အသားအရေအခွအေနေထွက်ပေါက်ရယူ.
4. ကြိုတင်ကာကွယ်မှုဆေးဝါး – ကောင်းသောအခွအေနေအသားအရေလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်တစ်ဦးကမျှမကြမ်းတမ်းအဝတ်လျှော်ဆံ့သို့မဟုတ် Over-အဝတ်လျှော်သင့်ပါတယ်, ဒီလုပ်နိုင်တဲ့အခြေခံအသားအရေ sensitivity ကိုကတိပေးသို့မဟုတ်ရေချိုးချွတ်ထားပြီးအဘယ်အရာကို restore မှရေနံနှင့်အတူ smear ၏ကုန်စည်ကိုကျော်ကတိပေးသောအကြောင်းပြချက်များအတွက်, လမျး၌အသားအရေအတွက်သေးငယ်တဲ့ကို aperture ပိတ်ဆို့. Brand with mild peeling factor are OK to use; i.E. Not harsh nut or fruit shell pieces that can break skin. And bounce alcohol brand when promising; these can share off the high coating of your skin and basis your glands to item for consumption extra smear with oil, လမျး၌အသားအရေအတွက်သေးငယ်တဲ့ကို aperture ပိတ်ဆို့.
If you do recognize acne-troubled extent, do NOT clutter with them. Keep in mind that these are already age in the preparing, and cramming or option beauty spot can compel the contaminate place to revert back inside, ထိုဒေသတွင် disquieting တိုးနှင့်ဖြစ်ကောင်းတဲ့အမာရွတ်စွန့်ခွာ. အခြေခံပါလျှင်, အခြားရွေးချယ်စရာကုသမှုများအတွက်အရေပြားအထူးကုဆရာထံမှထောက်ခံမှုရှာအံ့သောငှါ.
5. ဖျက်စီး – နှစ်ခုလိင်အဘို့အဖျက်စီးထူးချွန်တစ်ခုခွံ၏ထံသို့ခြင်းသို့မဟုတ်ကာကွယ်တားဆီးရေးနှင့်အတူထောက်ခံကြောင်းမှထုံအသားအရေကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့်အသားအရေအတွက်သေးငယ်တဲ့ကို aperture ခုံဖိနပ်မှအကြွင်းအကျန်ထွက်ခွာတစ်ဦးအစားထိုးအဖြစ်အရေပြားအခြေအနေထဲက thinning အချက်ကိုအမှတ်၌တည်ရှိ၏. နှင့်ရွေးချယ်ထားသည့်အလင်းတစ်အရေပြားအခြေအနေကိုယျပိုငျပစ်စညျးအတှကျပြီးသားလမ်းအတွက်, ဖျက်စီးယင်းနှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ခြင်းမှသုတ်သင်ရှင်းလင်း whiteheads နှင့် blackheads ထောကျပံ့နိုငျ. သတိ၏စကားလုံး: ရောဂါကူးစက်သို့မဟုတ်အလွန်အကျွံလိုက်စားလိုက်စားနှင့်အတူအတိုင်းအတာများအတွက် (နီခြင်း, အမြင်, အရေပြားအခွအေနေဖြန့်ချိ, အနာစိမ်း, စသည်တို့ကို), ရိတ်ကြဘူး. သို့မဟုတ်တကအသေးဆုံးငွေပမာဏမှာ, နူးညံ့သိမ်မွေ့သောအသားအရေများအတွက်ဖျက်စီးမုန့်ကိုထုတ်ဝတ်!
အရေပြားထိန်းသိမ်းမှု – ဘယ်လိုအဆိုပါအိုမင်းခြင်းဟာမျက်နှာမျှော်လိုပဲလော?
admin ရဲ့ မတ်လ 30, 2017
အရေပြားထိန်းသိမ်းမှု: lotion Vs. မုန့်
admin ရဲ့ ဖေဖေါ်ဝါရီလ 1, 2020
admin ရဲ့ မတ်လ 27, 2017
B က. Kamins
အေး။ ခဲ 24/7
GM က Collin
အဖွဲ့အစည်းတွေက & က Hip ယင်း
MTS Derma ကြိတ်စက်
Wilma ဟာ Schumann
အရေပြားစောင့်ရှောက်ကုန်ပစ္စည်းများအွန်လိုင်း မူပိုင် © 2020. theme အားဖြင့် MyThemeShop